Ngaba ukufomatha iMac yam kwiMac OS Plus (yeJenali) kwenza ukuba inkqubo entsha ye-APFS? | Ndisuka mac
Lo ngumbuzo oza kuthi kakhulu emva kokumiliselwa kwinguqulelo entsha yeMacOS ePhakamileyo yeSierra kwaye kubonakala ngathi le yinkqubo ezenzekelayo okoko nje sinediski ye-SSD kwi-Mac yethu kwaye ukucinywa kwediski kuyenziwa ukufaka ingxelo entsha kwasekuqaleni.
Sele sithethile kumanqaku angaphambili ukuba akuyomfuneko ukwenza ufakelo olucocekileyo lwenkqubo entsha yokusebenza kwi-Mac ngaphandle kokuba uvela kwiinguqulelo ezindala kakhulu okanye uqaphele ukuba iMac iyacotha kweminye imisebenzi. Kwimeko nayiphi na into eqhelekileyo, ngaphambi kokuchukumisa nantoni na, khumbula ukubuyela umva kwiTime Machine okanye efanayo.
Inyani yile yokuba uninzi lwenu lusibuza ukuba kwenzeka ntoni xa usenza ufakelo olungenaqanda kwiMac yam, ukhetha inkqubo yefayile yeMac OS Plus (enerejista) kwaye kwenzeka ntoni Inkqubo ngokwayo inoxanduva lokwenza utshintsho kwinkqubo yefayile ye-APFS kwimeko yokuba ne-SSD okanye ukushiya iMacOS Plus, kwimeko yokuba nediski enzima okanye iFusion Drive.
Kwelinye icala, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba sinjalo usebenzisa idiski yangaphandle kwi-Mac njengediski yenkquboKungenzeka ukuba nokuba yi-SSD uhlaziyo aluyi kutshintsha ifomathi kwaye lishiye idiski kwifomathi ye-HFS + okanye ye-Mac OS Plus. Kwezi meko umsebenzisi angakhetha ukutshintsha ifomathi yediski iye kwi-AFPS ngaphandle koloyiko lokuphulukana nayo nayiphi na into, kodwa kwakhona sigxininisa ekwenzeni inkqubo yogcino ukuthintela iingxaki ezinokubakho.
Khumbula ukuba utshintsho kwifomathi entsha yolawulo lwefayile ayicimi nto ngokuzenzekelayo ukuze kungoyiki ukwenza utshintsho ukuba sine-SSD, ngokuchaseneyo, Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe le fomathi ye-APFS.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » i-MacOS High Sierra » Ngaba ukufomatha iMac yam kwiMac OS Plus (yeJenali) kwenza ukuba inkqubo entsha ye-APFS?
Jordi othandekayo: Molo mva nje ndithenge iMac engama-27 nge-1tb Fusion drive ngeMac OS Sierra umbuzo wam xa ufomatha kwasekuqaleni ndikhetha ukhetho lwe-APFS okanye ndiqhubeke nenkqubo yefayile ye-HFS + endala kwirejista kuba uninzi Luthi linde uhlaziyo lwenkqubo ye-APFS.
Ndingayivuyela ingcaciso ngalo mbandela.
KwiiFusion Drives uApple uthi ncamathela kwi-HFS +, enyanisweni ngekhe usebenzise i-APFS kuba une-ssd kunye nediski enzima ukuze usebenzise i-HFS +
Ngokuka-Apple kungekudala kwi-APFS iya kuba nakho ukusetyenziswa kwiiMacs nge-FD
Jordi othandekayo: Molo mva nje ndithenge iMac eyi-27 nge-1tb Fusion drive eneMac OS Sierra umbuzo wam xa ufomatha kwasekuqaleni ndikhetha ukhetho lwe-APFS okanye ndiqhubeke nenkqubo yefayile ye-HFS + endala kwirejista kuba uninzi luthi lindele ukubakhona kohlaziyo lwenkqubo ye-APFS yokuqhuba kwefusion
UCesar Sanoja sitsho
Nceda ungandinceda ngokundixelela ukuba nditshintshela njani kwi-APFS Kwidiski engaphandle ye-SSD esetyenziswe njengediski yenkqubo, kuba njengoko ubonakalisile emva kokuhlaziya ukuya kwi-MacOs High Sierra, ayitshintshanga kwifomathi ye-HFS +. Kufuneka kuqatshelwe ukuba idiski eyi-1 TB HDD. Ngaphakathi kwikhompyuter ndiyilehlule ngo-2, ndisebenzisa enye yezahlulelo njengediski ye-500 Gb yokusetyenziswa ngumatshini weXesha.
Phendula kuCesar Sanoja
Kulula njengokuguqula ngesandla idiski ye-SSD kwifomathi ye-APFS, kwiinguqulelo ze-beta isebenze ngaphandle kwengxaki ngoko ke kufuneka isebenze ngaphandle kwengxaki. Gcina ukugcinwa kwaloo mqhubi wangaphandle kwaye wenze utshintsho kwi-APFS
Enkosi Jordi ngokuphendula, kodwa ungandikhokhela ukuba ndenze njani? Ewe, ukuba ndingena kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwaye ndikhethe i-SSD drive ene-OS, ayindinike ithuba lokutshintshela kwi-APFS. Okanye ubuncinci andazi ukuba ingayintoni!
UManuel Valverde sitsho
Umbuzo endingekawuhlaziyi. Ndinayo inkqubo kwi-ssd yangaphakathi, ayisiyiFusion Drayivu. Ukuba andiyifaki ukusuka ekuqaleni, ngaba itshintshela kwi-APFS ngokuzenzekelayo? Ukuba ndiyitshintshela kwifomathi entsha, ngaba ndiza kuba neengxaki zokuhambelana nezinye iikhompyuter xa nditshintshiselana ngeefayile? Ndinexhala lokuba ndigqitha kwiifayile kwabanye abantu abaneeMacs ezineenkqubo ezindala ngenxa yomsebenzi kwaye abanako ukuzifunda ngenxa yokungahambelani.
Phendula uManuel Valverde
Ndikwimeko efanayo. IMac mini 1Tb ene-HDD ngaphakathi kodwa i-SSD yangaphandle njengenkqubo nge-USB 3.0. Ngaba banokusinika isisombululo.
Ndinayo inkqubo kwi-ssd yangaphakathi, ayisiyiFusion Drayivu. Ukuba andiyifaki ukusuka ekuqaleni, ngaba itshintshela kwi-APFS ngokuzenzekelayo? Ukuba ndiyitshintshela kwifomathi entsha, ngaba ndiza kuba neengxaki zokuhambelana nezinye iikhompyuter xa nditshintshiselana ngeefayile? Ndinexhala lokuba ndigqithisela abanye abantu abaneeMacs ezineenkqubo ezindala ngenxa yomsebenzi kwaye abanako ukuzifunda.
IsiJamani L. Castillo sitsho
Molweni kulungile! Kuyenzeka ukuba ndibonakalise ingxaki ethile, xa ukufomatha ndikhethe uhlobo olutsha lwefomathi yeApple kwaye kuvela ukuba umlayishi wesiqalo ngoku akasamkeli isahlulelo seBoot Camp ... Ndingenza ntoni? njengoko bendiphanda ifomathi entsha yeapile engazifundi izahlulo zeBoot Camp ngenxa yongquzulwano nomlayishi wesiqalo.
Phendula Jamani L. Castillo
I-beta yokuqala kawonkewonke ye-macOS ePhakamileyo yeSierra 10.13.1 kunye ne-tvOS 11.1 ngoku iyafumaneka